Dad badan oo laga daad-gureeyay dhismayaal dhaadheer ee ku yaalla magaalada London – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dad badan oo laga daad-gureeyay dhismayaal dhaadheer ee ku yaalla magaalada London
Illaa 5 dhisme oo ku yaalla degmada Camden ee waqooyiga magaalada London ayaa laga daad-gureeyay dad badan, kadib markii looga cabsaday inuu ka kaco dab la mid ah kii dhawaan ka kacay dhismihii Grenfell Tower ee galbeedka London.
Dhismayaashaasi ayaa la sheegay inay ka sameysan yihiin qalabka dhisme ee lagu dhisay gurigii dheeraa ee dhawaan ku gubtay galbeedka London, waxaana haatan socdo baaritaano ku aadan waxa rasmiga ah ee sababay dabkii hore.
Sidoo kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya inay jiraan guryo gaaraya illaa 600 oo ku yaala dalka UK, islamarkaana ka sameysan qalabkii laga sameeyay dhismihii uu dhawaan dabka ka kacay ee Grenfell Tower, kaas oo ay ku geeriyootay in ka badan 80 qof.
Shantaasi dhisme ee haatan dadka laga daad gureeyay ayaa ka kooban illaa 700 oo guri, waxayna dhismayaashaasi ku yaallaan degmada Camden ee waqooyiga London.
Dadkaasi laga daad-gureeyay dhismayaashaasi ayaa haatan la dejiyay Hoteelo, inkastoo qaarkood ay sheegeen inay ku adag tahay inay hoteelo kusii noolaadaan.